China 3.7v 2600mah Lithium li-ion Rechargeable ICR 18650 terylọ ọrụ batrị Li ion na Flọ Ọrụ Na-emepụta China na Onye Na-ebunye Onye Nlekọta Ihe | SOSLLI
Ngwa & Solutio
Model Mba: SSL-ICR3S12P18650E25
Okwu mmeghe: 3.7V 2600mAh li-ion lithium ion packaging batrị maka ìhè anyanwụ n'okporo ụzọ, igwe elektrik, ihe eji arụ ụlọ, Ngwaọrụ ọkụ, ihe egwuregwu, ihe GPS, Igwe ọkụ, oriọna Lawn, oriọna minit, oriọna LED, Lawn Lamp, oriọna minit, oriọna CCTV na igwefoto nchekwa, nchekwa ndabere, wdg.
1. Ọdịdị dị mma-enweghị nhịahụ, ntụgharị, mmetọ na mmiri
2. Mkpuchi mmerụ ahụ, obere nguzogide, ibu dị mfe, ikike dị elu, enweghị ntụgharị okirikiri, ogologo ilfe
3. gingkwụpụta mmiri dị ala: -40 ℃
4. Nwere ike ịnabata obere usoro
5. Nwere ike inye nlele
6. Ngwa dị ọtụtụ, dịka Nchọpụta Nchọgharị Mmiri, Mmiri, ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, ngwa nbipute 3D, Nchekwa ọkụ, Ngwa Nkwukọrịta, Mma Ngwa Ọgwụ, wdg.
7. Anakwere OEM / ODM
Akwukwo 8.Battery nabatara
Ngwaọrụ batrị ndị ọzọ na chaja nke ọkọlọtọ batrị
Ọ bụrụ na ịchọrọ batrị ndị ọzọ, biko chọpụta nkọwa dị n'okpuru ụdị, ma ọ bụ gaa na nke anyị Nkọwapụta Ụlọ ọrụ ma zitere anyị Nnyocha ma ọ bụ Email na adreesị nzipu ozi gị, anyị ga-aza gị n'ime awa ole na ole, daalụ!
Anyị na-asọpụrụ iwu njem njem batrị, nke ngalaba nke ikuku, nke awara awara ma ọ bụ nke osimiri.
Nọmalị, batrị ọ bụla ga-ejupụta na PE ma ọ bụ akpa mkpuchi ọzọ, ma ọ bụ akpa, wee hụ na a ga-edobe nke ọ bụla site na ndị ọzọ, tinyezie ha na katọn dị ka ndị na-ebubata ụgbọ mmiri anyị chọrọ. Anyị na-anabata nkwakọ ngwaahịa dị iche iche maka batrị ọ bụla dịka ịchọrọ.
1. Ihe ngwugwu PVC maka sel
2. Nkọwapụta ngwongwo katoodu dị mma
3. Anyị nwekwara ike ịhazi ngwungwu dịka ihe ịchọrọ.
Modelsdị dị iche iche maka nhọrọ gị
Anyị nwere karịa ụdị 90 nke sel batrị, nke ike nwere ike kpuchie site na 80mAh ruo 7000mAh.
Ihe anyị na-arụpụta kwa ụbọchị bụ sel batrị dị puku 300,000 na ngwongwo batrị 40,000 gbakọtara.
Anyị nwere ike ịnye ndị ahịa batrị ọ bụghị naanị ot
ụdị kamakwa ahaziri ụdị ka
chọrọ ihe ndị ahịa chọrọ pụrụ iche.
Batrị dị ala 18650 2600mAh 3.7V batrị lithium ion maka ngwaọrụ nchọta mmiri
Packig: Na-erube isi n'iwu iwu njem batrị ma ọ bụ dabere n'ihe ndị ahịa chọrọ
Nke gara aga: 48V 20Ah Li-Ion lithium ion batrị maka ọkpọ Gọọsị Electric
Osote: 18650 3.6V 2600mAh Samsung Bathi Lithium Batri Maka igwe POS
Batrị 20ah Lithium Ion, Batrị Lithium-Ion 3.6v, Ngwunye batrị, Batrị Lithium batrị, Sili batrị Lithium Ion, Ibe batrị Lithium,